Ilay Harena Very, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Amin'ity indray mitoraka ity dia tsy hiresaka afa-tsy lalao iray azontsika sintonina maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra isika, satria amin'izao fotoana izao dia nijanona tsy nanolotra ny fangatahan'izy ireo nandritra ny fotoana voafetra ireo mpandraharaha, mazava fa efa miomana amin'ny Krismasy izy ireo ary efa manolo-tena amin'ny zavatra hafa. Ny lalao resahintsika anio, Ny harena very dia lalao manana vidiny 1,99 euro mahazatra ao amin'ny App Store, fa mandritra ny fotoana voafetra dia azontsika atao ny misintona azy maimaim-poana. Ity lalao mistery sy ankamantatra ity dia amin'ny Espaniôla, noho izany dia tsy ho fialan-tsiny amin'ny tsy fahafahany mankafy azy io.
Ny harena very dia lalao iray anananay ny iraka hikarohana ilay harena piraty very amin'ny lalao ankamantatra izay ahafahantsika mampiala voly ny tenantsika mandritra ny fotoana maharitra. Tsy maintsy mijery ny lava-bato misy ny piraty, ny tempoly taloha isika, ny rafitry ny mponin'ny hazo taloha hahitana làlana miafina, famantarana hanampiana antsika hahita ilay harena, ary piozila mba hahatongavana any amin'ny nalehantsika.
Mampiavaka ny harena very
Sary manaitra HD namboarina manokana!
Famoronana feon-kira manokana sy vokam-peo!
Rafitra tendrena mifangaro ho an'ny rehefa tafahitsoka ianao
Sarintany mavitrika hanehoana ny pikantsary notsidihinao sy ny toerana misy anao ankehitriny
Fakan-tsary fakana sary famantarana sy famantarana rehefa hitanao
Puzzles, famantarana ary zavatra am-polony
Voatahiry ho azy ny fandrosoanao
Azo alaina finday sy takelaka!
Ny harena very dia mitentina 130 MB amin'ny fitaovantsika, ary mifanaraka amin'ny iOS 6.0 na avy eo, mifanaraka amin'ny iPhone, iPad na iPod touch ihany koa izy io. Ny hany zavatra ratsy momba ity lalao ity dia ny tsy fiarahany amin'ny Game Center, ka tsy mamela antsika hampifanindry ny fandrosoantsika amin'ny fitaovana hafa.
Ny hazakazaka ho an'ny harena sarobidy€ 4,49
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Ilay harena very, maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra
Misaotra noho ny vaovao, tiako ny lalao an'ity mpampivelatra ity ary tsy nanana izany ny developer.
Afaka manaraka an'i Santa Claus mivantana amin'ny Google Maps amin'ny iOS ianao izao
Santa Claus dia mitondra antsika fampiharana 16 miaraka amin'ny fihenam-bidy hatramin'ny 80%